Myanmar Monk Student Association: April 2012
ယာဝဒေ၀ အနတ္တာယ၊ ဥတ္တံ ဗာလဿ ဇာယတိ။
ဟန္တိ ဗာလဿ သုကံ္ကတံ၊ မုဒ္ဓမဿ ၀ိပါတယံ။
သူမိုက်၏ အတတ်ပညာသည် သူမိုက်အား အကျိုးမဲ့ရန်အတွက်သာ ဖြစ်၏။ ကုသိုလ်အဖို့ အစုကို ဖျက်ဆီး၏။ ပညာဦးထိပ် ကို ပြတ်ကျစေတတ်၏။ (ဗာလ၀ဂ်- ဓမ္မပဒ)
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အခြားသူတစ်ဦးကို အပြစ်ပြောလိုက်ချင်ပေမယ့် အပြစ်တင်ထိုက်တဲ့သူဟာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစား မရခဲ့တာနဲ့ပဲ ကြုံခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အပြစ်ကင်းပါတယ်လို့ ဆိုလို့မရနိုင်အောင် ကျွန်တော် အတွင်းစိတ်က သိနေတာကြောင့်ပဲထင်ပါတယ်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ thadawa on Thursday, 26 April 2012
အကုသိုလ် နှင့် ပန်းတိုင်
တစ်ခါတုန်းက အလွန်လှတဲ့ ဗာရာဏသီမင်းတစ်ပါး ရှိပါတယ်။ သူ့ကိုမြင်လိုက်ရ တဲ့သူတွေဟာ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ကြည့်ချင်စိတ် ဖြစ်ကြရပါတယ်တဲ့။ တစ်နေ့တော့ ဗာရာဏသီမင်းဟာ မြို့ထဲကို လှည့်လည် ပါတယ်။ တစ်နေရာ အရောက်မှာတော့ သူဋ္ဌေး တစ်ယောက်ရဲ့ မယားက လေသာ ပြတင်းပေါက်ကနေ မင်းကို ရပ်ကြည့် နေပါတယ်။ မင်းလည်း ရပ်ကြည်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကို မြင်ပြီးတပ်မက်တဲ့ ရာဂစိတ် တွေဖြစ်သွား ပါတယ်။ ဒီတော့ အမတ်တစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး “အဲဒီမိန်းမမှာ ယောက်ျား ရှိမရှိ” စုံစမ်း ခိုင်းပါတယ်။
The Meaning of “Thungran”
1. The Meaning of “Thungran”
• Thungran = Transition (derives from Pali as well as Sanskrit)
• Thungran days are celebrated at the transitional time from old year to New Year on the month of Tankhu (April), the first month of Rakhine or Myanmar Calendar year.
• The Rakhine calls that month as “Tar ku la” that means the transitional month.
2. Brief History of “Thungran”
• In BC 528, during the reign of King Canda Suriya of Dannyavadi, the Lord Buddha together with 500 disciples visited Selagiri Kyauktaw Hill according to the telepathic request and invitation by the King who was much closed friend of the Buddha in the past lives. In the moment,areplica of the Lord Buddha namely “Mahamuni” was casted to be worshiped by the King and Rakhine people. Then the sacred Buddha Image was poured and offered with the sweet smelling creamy water (Nan tha re = Sandalwood).
• Since then, the tradition is appeared for Rakhine people cleansing and offering of the Nan tha re to Buddha Statues.
• With the remaining Nan tha re, Rakhine people pour on each other and the tradition of “Thungran Water Festival” emanated from that time till the date.
3. Celebrating Rakhine Thungran Traditionally
• Rakhine Thungran is usually celebrated in three categories, namely (1) Nantha Grinding Ceremony, (2) Nantha Pouring to the Buddha Statues, and (3) Water Festival.
• As of Buddhism-related festival, Rakhine people cleans the monasteries and its ordination building (Thein = Sima) with water in every wards and village on the eve of Thungran.
• At that evening, Rakhine girls assemble at the pagoda platform orahall bringing sandalwoods of white and red (Nantha Phyu and Nantha Ni). They grind the Nantha pieces or blocks on the face of Kyauk-pyin (round flat rock) to obtain the creamy sweet smelling Nantha. At the same time, the young Rakhine men cheer and sing songs with the musical instruments to make the Nantha Grinding event intoacompetition. The Nantha creams are well preserved in pots or containers.
• The next morning (Thungran Ah Kya Day), the people go to the pagodas and monasteries and do the cleaning and offering of the Nantha to Buddha statues. Then the Five Concepts of Sila are received from monks to whom offering are delivered. Thereafter, young girls pour Nantha creams to those statues. Indeed, that is the gesture of welcoming to Thungran.
• The opportunity of watering each other in the pandals during the days from Akya to Attat is the affectionate and efficacious tryst for boys and girls.
• Each pandal built of wood and bamboo, decorated with palm leafs and padauk flowers, is placed withalong boat filled with water therein. Wooden barricades with decorations are built firmly in front of it. Pandals are used to be named in lively titles and well decorated name board is set up at the forefront thereof. Generally, water throwing period prolongs from 10 am to4pm daily.
4. Splashing Water in the Pandals
• The pandal girls have to sit facing the boat with the backs to the open side of pandal.
• Boys either in group or individually roaming around and reveling songs and rhymes, come into the pandal to play watering with pandal girls. On request to the pandal supervisor ladies, they will choose the girl with whom they would like to play watering with. They chosen girl then offersabucket of water to the boy and he will start to play water, then the girl response watering with her own bowl. Others while waiting their turn outside the pandal will play music, songs or rhymes. Necessary measures are pre-arranged to avoid discontent with regard to priority to enter the pandal.
• Such traditional water throwing of Rakhine national is unique among other nationals of Myanmar. (Collected and typed by Ashon Nyanuttara)
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ မောင်သိရီ on Saturday, 21 April 2012
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ဗုဒ္ဓဘာသာပွဲတော်များ |
သင်္ကြန်တွင်ပြုလုပ်သော ထိုင်းနိုင်ငံမှ ရခိုင်ရိုးရာ ကျင်ပွဲ အထူးစည်ကား
ကျင်သန်များ အပါအ၀င် ကျင်ဝါသနာ ပါသူ ၂၀၀ ကျော် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့သော သင်္ကြန်ကာလ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ရခိုင်ရိုးရာ ကျင်ပွဲမှာ အထူး စည်ကားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
၎င်းကျင်ပွဲကို သင်္ကြန်အကျနေ့ ဖြစ်သော ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင် ဖူးကတ်မြို့ ပါသောင် ကမ်းခြေ မနှင်းဆီ ပန်းရံ အလုပ်ဆိုက်တွင် လေးဝတီ မျိုးချစ် ရခိုင်လူမှုရေး အသင်းမှ ကြီးမှူး ကျင်းပခဲ့သည်။
" အခုနှစ် သင်္ကြန်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရခိုင်ရိုးရာ ကျင်ပွဲက (၈) ကြိမ်မြောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်အားကစားကို စိတ်ဝင်စားသူတွေရော၊ တကယ့်ကျင်အားကစားသမားတွေရော စုစုပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ခန့် ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျင်ပွဲကတော့ အထူး စည်ကားခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်လည်း ၂၀၀၀ နီးပါး တက်ရောက်ပြီး ကျင်ပွဲကို အားပေးခဲ့ကြပါတယ်" ဟု လေးဝတီ မျိုးချစ် ရခိုင်လူမှူရေး အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ကိုစိုးမြင့် မှ ပြောသည်။
ရခိုင်ရိုးရာ ကျင်ပွဲကို ရခိုင်အမျိုးသားများသာများသာမက တခြား မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်ကြသည့် ဗမာ၊ မွန်၊ ထားဝယ် တိုင်းရင်းသားများလည်း လာရောက်ကြည့်ရှု့ခဲ့ကြသည်။
" ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်တွေသာမက တခြားတိုင်းရင်းသားတွေလည်း လာရောက်ပြီး စိတ်ဝင်တစား ကျင်ပွဲကို ကြည့်ရှု့ခဲ့ကြပါတယ်။ သင်္ကြန် အလုပ်ပိတ်ရက်ဆိုတော့ အလုပ်သမားတွေက တော်တော်များများ လာကြပါတယ်။ ကိုယ်ရိုးရာ အားကစား ပွဲတော် တစ်ခုကို သူများ နိုင်ငံမှာ ဒီလို ကြီးကြီးမားမား လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အထူး ၀မ်းမြောက် ဂုဏ်ယူပါတယ်" ဟု ကျင်ပွဲကို သွားရောက်ခဲ့သူ ရမ်းဗြဲ လေးတောင်မှ ကိုသန်းရွှေက ပြောသည်။
ကျင်ပွဲတွင် ရွှေမောင်းတန်း ပထမဆုကို မောင်မောင်ထွန်း (ရမ်းဗြဲ) မှ၎င်း၊ ဒုတိယ ဆုကို ဦးကျော်မြင့် (ရသေ့တောင်)မှ၎င်း ရရှိသွားခဲ့သည်။ ပထမဆုကို ဘတ်ငွေ (၈၀၀၀၀) သောင်းကျော် ချီးမြှင့်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကျင်ပွဲ ကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း ကိုစိုးမြှင့်က ယခုလို ပြောသည်။
" ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရခိုင်ရိုးရာ ကျင်ပွဲကို အဓိက ကျင်းပ ကြတာ နေရာ ၆ ခုလောက်မှာ ကျင်းပ ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖူးကတ်မြို့ ပါသောင်ကမ်းခြေမှာ ကျင်းပရတာကတော့ ကိုယ့်ရိုးရာ အားကစားကို မြေတောင်မြောက်ပေးချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ပါတဲ့ အပြင် ဒီရိုးရာ အားကစားကို နိုင်ငံတကာနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သိရသလောက် ရခိုင်ရိုးရာ အားကစား ကျင်ကို အရှေ့တောင်း အာရှ (ဆီးဂိမ်း) မှာတောင် ထည့်သွင်းဖို့ အဆိုပြုထားတဲ့ အတွက် ဒီအားကစားကို ပိုမိုပြီး လူသိလာအောင် လုပ်တဲ့ သဘောလည်း ဖြစ်ပါတယ်" ဟု သူက ပြောသည်။
ကျင်အားကစားကို လိုက်စားခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာ သန်စွမ်းခြင်း၊ ဆေးလိပ် အရက် သေစာ သောက်စား မူးယစ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးပြီး နုပျို လန်းဆန်းခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရလည်း တည်ငြိမ်မူနှင့် တိုးတက်မူ ရရှိခြင်းတို့ အပြင် ကျင်ပွဲကို ကျင်းပခြင်း ဖြင့် မိမိ တို့ ၏ ဓလေ့ ရိုးရာ များကို ထိန်းသိမ်းရာရောက်ခြင်း၊ ရခိုင်တမျိုးသားလုံး စည်းလုံးပြီး အချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်း ရရှိကြောင်း ကိုစောမြှင့်က နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
ကျင် ဆိုသည်မှာ ကျားနှင့် ယင် တစ်ကောင်နှင့် တစ်ကောင် အဖမ်း၊ အရုန်း၊ အပြေး၊ အချ စသည့်ကို အတုယူပြီး ပြုလုပ်ထားသော အားကစားနည်း ဖြစ်ပြီး ကျင်ဆိုသည်မှာ ကျားယင် ဆိုသာ စကားလုံးမှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်ကာ ရှေးခေတ် ရခိုင် ဘုရင် လက်ထက်မှ စပြီး ကစားလာသော ရိုးရာ အားကစား တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခု ပြုလုပ်သော ရခိုင်ရိုးရာ ကျင်ပွဲတွင် ရခိုင်စည်တော်များ တီးခတ်ပြီး အားပေးခဲ့ကြသလို ရခိုင် သံဃာ့တော်များ၊ အမျိုးသမီးများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ တက်ရောက်လာသူများကို ရခိုင် ထမင်း ဖြင့် ဧည့်ခံပြီး ကျင်ပွဲ ကို ညနေ ၆ နာရီ ခွဲ ခန့် တွင် အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နျူကလီးယား လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့် အီရန်နိုင်ငံ
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Ali Akbar Salehi က ယခု တစ်ကြိမ်ကျင်းပတဲ့ အင်အားကြီး နိုင်ငံ ၆နိုင်ငံနဲ့ အီရန်နိုင်ငံအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာ
ယုံကြည်မှုကို တည်ထောင်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးက တီဟီရန်မြို့သို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိနေတဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Yukio Hatoyama နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က တွေ့ဆုံစဉ်မှာ အခုလို ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နျူကလီးယား လက်နက် မပြန့်ပွားရေးစာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေး ထိုးထားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အဏုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ IAEA အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အီရန်နိုင်ငံ ဟာ နျူကလီးယား လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အလျှော့ပေးမှာ မဟုတ်ကြောင်း သူကဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ငလျင်နဲ့ ဆူနာမီဘေးဒဏ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်ပြည်သူတွေကို အီရန်နိုင်ငံမှ ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နဲ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံ ၆နိုင်ငံတို့ဟာ ၂၀၁၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သလို ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှာလည်း တူရကီနိုင်ငံ အစ်္စတန်ဘူလ်မြို့မှာ ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေကို ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားဖို့ အသင့်ရှိကြောင်း ဒါပေမယ့် ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ မောင်သိရီ on Thursday, 19 April 2012
တရားနာခြင်း၏အကျိူး( ၅ )ပါး
၁။ မကြားဖူးသေးသော အကြောင်းအရာများကို ကြားရခြင်း။
၂။ ကြားဖူးသော အကြောင်းအရာများကို ထပ်၍ ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရခြင်း။
၃။ ယုံမှား သံသယ ဖြစ်နေသော အချက်များ၌ ယုံမှား ကင်းရခြင်း။
၄။ အယူမှန် သမ္မာဒိဠိ ကို ရခြင်း။
၅။ သဒ္ဒါ ပညာ တိုးပွား၍ စ်ိတ်ကြည်လင်ခြင်း။
ဘုရားရှင်တော် မပွင့်ပေါ်လျှင် သူတော်အများ စိတ်ကောင်းထားလည်း ဤကားကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်နှင့် ထိုထိုဘုံဘဝ မသိရများလှ အပြစ်တွေ။
ဘုရားရှင်တော် ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ ဟောဖော်ညွှန်ပြ မြတ်ဓမ္မကြောင့် ဤကားကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်နှင့် ထိုထိုဘုံဘဝ သိကြရ များလှကျေးဇူးတွေ။
ကျေးဇူးတော်ရင် ဘုရားရှင်ကို ဦးတင်မပြတ်ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ အမြိုက်ရတနာ သာသနာ၏ နိုင်ရာဝန်ထမ်း ကိုယ်စီစွမ်းကြိုးပမ်းကြပါလေ။
_/\__ *** _/\__ *** _/\__
အင်္ဂ္ဂုတ္ထိုလာ သာသနာကွယ်ကြောင်း တရားပေါင်းကား ရဟန်းတို့ တရားမနာ ၊ စာပေမသင်၊ နှုတ်တွင်မဆောင်၊ သိအောင်မပြု ၊ ဓမ္မာနုဓမ္မ ပဋိပတ်ကွာ ဤငါးဖြာတည်း။
နောင်လာထို့ပြင် စာသင်ပယ်လျော၊ ကျယ်မဟောကြ၊ ကျယ်မချနှင့်၊ ကျယ်စွမအံ၊ မကြံမစည်၊ ဤငါးမည်တည်း။
အက္ခရာပုဒ်ပျက် လေ့ကျက်သင်ကြ၊ ဆုံးမမယူ ၊ စာချသူရှား၊ လာဘ်များအောင်ကြံ၊ ခိုက်ရန်ကွဲပြား ဤငါးပါးသည် ဘုရားသာသနာ ကွယ်ကြောင်းတည်း
“သဗ္ဗေသတ္တာ မရဏဓမ္မာ ၊ မရဏပရိယောသာနာ မရဏံ အနတီတာ” ဆိုတဲ့အတိုင်း ငယ်သူရော၊ ရွယ်သူရော၊ ကြီးသူရော ဘယ်သူမဆိုသေရခြင်း သဘောတရားတွေ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ရှိကြတယ်။ ဘယ်လောက်ချမ်းသာ ချမ်းသာ ၊ ဘယ်လောက်ဆင်းရဲ ဆင်းရဲ သေဆုံးတဲ့အခါ လက်ဖဝါး ခြေဖဝါးသာကျန်ပြီး သုဿန်မှာ သွားဆုံရတယ်။
သေရခြင်းသဘောတရားကို မဖြစ်အောင်၊ မကြုံအောင်၊ မဆုံအောင် ဘယ်သူမှ မလုပ်နိုင်ဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်း သတ္တဝါတိုင်း သတ္တဝါတိုင်း ဖြစ်ကြရ၊ ဆုံကြရ၊ သေကြရတယ်။ အဲဒါလို သေကြတဲ့အခါ အသက်ကြီးမှ အိုမင်းရင့်ရော်မှ သေတာမဟုတ်ဘူး။ အရွယ်ကောင်းတုန်းလည်း သေတာပဲ။ မွေးကင်းစလည်းသေတာပဲ။ အမိဝမ်းတွင်းမှာလည်းသေတာပဲ။ဘာကြောင့် ဒီလို အရွယ်မရွေး သေနေကြတာလဲလို့ ဆန်းစစ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်
ဥပမာဖြင့်ပြောရရင် အိုးထိန်းသည် ပြုလုပ်ထားတဲ့ မြေအိုးတွေရှိတယ်။ အဲဒီအိုးတွေမှာ မီးမဖုတ်ရသေးတဲ့ အစိမ်းသက်သက် အိုတွေရှိသလို မီးဖုတ်ပြီးသား ကျက်နေတဲ့ အိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ တစ်ခါ အိုးစိမ်းတွေ မှာလည်း အသေးစားအိုး၊ အလတ်စားအိုး၊ အကြီးစားအိုးရယ်လို့ သုံးမျိုးသုံးစားရှိပြန်တယ်။ အဲဒီသုံးမျိုးထဲမှာ အကြီးဆုံး အိုးစိမ်းတွေသာ အရွယ်ကြီးလို့ ကွဲတာမဟုတ်ဘူး။ အလတ်စားအိုးတွေလည်းကွဲတာပဲ။ အသေးစား အိုးတွေလဲ ကွဲတာပဲ။ ဒါဖြင့် အဲဒီအိုးတွေ ဘာကြောင့်ကွဲရတာလဲ။ ပျက်စီးရတာလဲလို့ အကြောင်းရှာလိုက်တော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ၊ သူတို့သဘာဝကိုက ကွဲတတ်တဲ့သဘော၊ ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘော ရှိခြင်းကြောင့်သာ ကွဲရ၊ ပျက်စီးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အိုးစိမ်းတွေသာ ကွဲတာလား။ အိုကျက်တွေကော မကွဲဘူးလားလို့မေးရင် အိုးအကျက်တွေလည်း အချိန်ကျရင် ကွဲတာပဲ။ သဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အိုးစိမ်းနဲ့တူတဲ့ ပုထုဇဉ်သတ္တဝါတွေလည်း အသက် အရွယ် မခွဲခြားဘဲ အကြောင်းကံအားလျော်စွာသေကြရပါတယ်။ ပုထုဇဉ်သာ သေတာလား။ အိုးအကျက်နဲ့ တူတဲ့ ပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း အိုချိန်ကျရင်အိုပြီး သေချိန်ကျရင် သေကြရ၊ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြ ရတာချည်းပါပဲ။ ဘယ်သူမှ သဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။
မလွန်ဆန်နိုင်လို့ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေဆုံးသွားလို့ မိခင်တစ်ယောက် ပူဆွေးသောက ရောက်ရပုံ ဇာတ်လမ်း၊ သတိသံဝေဂရ သောကမီးငြိမ်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ အနည်းငယ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်
သာဝတ္ထိပြည့်ရှင် ဘုရင်ကောသလမင်းသည် သာဝတ္ထိမြို့က သူဌေးသမီး ဥဗ္ဗိရီကို ချစ်ခင်စုံမက် မြတ်နိုးတော်မူ သဖြင့် မိဖုရားအရာမြှောက် ကောက်တော်မူပါတယ်။ ကောသမင်းနှင့် ဥဗ္ဗိရီတို့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကြောင့် သမီးဇီဝါ မသက်ရှည်ကို ဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ မသက်ရှည်သည် မိဘနှစ်ပါးတို့၏ ချစ်ခင်ယုယ မြတ်နိုးမှုကို အထူးရရှိပါတယ်။
မသက်ရှည် အသက်တစ်နှစ် ၊ နှစ်နှစ် အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ သူငယ်နာရောဂါဖြစ်ပွားပြီး ကျန်းမာရေး ချွတ်ယွင်း လာတယ်။ မိဘနှစ်ပါးကတော့ အသည်းတထိတ်ထိတ် ၊ ရင်တဖိုဖို သမီးလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန် ငွေကုန်ကြေးကျခံကာ ဆေးဆရာ အမျိုးမျိုးဖြင့် ကုသကြသော်လည်း ရောဂါက မသက်သာ၊ နောက်ဆုံးတော့ သမီးလေးမသက်ရှည်သည် သူငယ်နာရောဂါဖြင့်ပဲသေဆုံးခဲ့လေသည်။
ရှုမဝချစ်မငြီး သမီးလေးသေတော့ ဘုရင်ကောသလကတော့ ယောင်္ကျားလေးပီပီ စိတ်ကိုထိန်းနိုင်တယ်။ သောကကိုပယ်ဖျောက်နိုင်တယ်။ မေတ္တာကရုဏာကြီးသူ ဥဗ္ဗိရီမှာတော့ သမီးလေးသောကကြောင့် စားမဝင် အိပ်မဝင်၊ အိပ်မပျော်၊ တကြော်ကြော်ငိုကာ သမီးမြှပ်နှံတဲ့ သုဿာန်မှာပဲ နေ့စဉ်လိုလို အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။
သမီးလေးများ အသက်ပြန်ရှင်လာမလား၊ သမီးငိုသံလေးများ ကြားရလေမလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ သောကဖိစီး ပရိဒေဝမီးတွေ အမြဲတောက်လောင်နေတယ်ပေါ့။ ဥဗ္ဗိရီသည် တစ်နေ့မှာတော့ ဘုရားရှင်ကို ရှိခိုး ဖူးမြော်ပြီး တရားတောင် မနာယူနိုင်ဘဲ သမီးလွမ်းစိတ်တွေ တရိပ်ရိပ်ပေါ်လာတာနှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဘုရားရှင် ထံပါးမှ ထွက်ခွာကာ အစိရဝတီမြစ်ကမ်းမှာ ငိုကြွေးနေတယ်။
ထိုအခါ ဘုရားရှင်သည် ဒုက္ခရောက်သူကို ကယ်တင်ချင်တာနဲ့ အနီးပါးကြွသွားပြီး ချစ်သမီးဥဗ္ဗိရီ၊ အသင်သည် ဘယ်အတွက်ကြောင့် နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလို အမြဲငိုကြွေးနေပါသနည်းဟု ဘုရားရှင်က မေးတော်မူတဲ့ အခါ “မှန်လှပါ မြတ်စွာဘုရား၊ ဘုရားတပည့်တော်သည် သမီးလေးမသက်ရှည် အသက်သေခွဲခွာသွားတဲ့အတွက် သောက ဖိစီး အငိုကြီး ငိုနေပါတယ်ဘုရား” ဟု ဥဗ္ဗိရီက လျှောက်ထားပါတယ်။
“ချစ်သမီး ဥဗ္ဗိရီ သင်သတိထားလော့။ သင်သည် သမီးသေလို့ ငိုခဲ့ရတဲ့ ဘဝပေါင်း ထောင်သောင်းမက ရှိခဲ့ချေပြီ၊ အခြားနာမည်၊ အခြားသမီး သေတာကို မဆိုထားနှင့်၊ မသက်ရှည်ဆိုတဲ့ နာမည်တူ တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ဤသုဿန်မှာ သေဆုံးသွားကြတဲ့ သမီးပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင် ရှိခဲ့ပေပြီ။ ယခုလို သင်ငိုနေခြင်းသည် အဲဒီသမီးပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ထဲက ဘယ်သမီးကို ပိုချစ်လို့ ငိုနေတာလဲ” ဟု ဘုရားရှင်က အဝိဇ္ဇာ ဖုံအုပ်ထားတဲ့ သံသရာဘဝခရီးစဉ်မှာ ဖြစ်ပျက်ပုံ အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းများကို မီးမောင်းထိုးပြတဲ့အခါ
ဥဗ္ဗိရီသည် အငိုရပ်ကာ စဉ်းစားခန်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ သြော် ငါကတော့ ယခုဘဝသာ လူဖြစ်လို့ ယခုဘဝသာ သမီး ရတာ သမီးသေဆုံးရလေခြင်းဆိုတဲ့ အသိနဲ့ မအိပ်နိုင်၊ မစားနိုင် တမှိုင်မှိုင် ငိုကြွေးပူဆွေး သောကရောက်ခဲ့ရ ပါလား။တကယ်တော့ ငါသည် ဘဝအကြိမ်ကြိမ်ရလို့ ဘဝ အကြိမ်ကြိမ် ငါကိုယ်တိုင် သေခဲ့ရတယ်။ ငါတင်မကဘူး။ ငါရဲ့ရင်သွေးသမီးလေးများလည်း မသက်ရှည် နာမည်တူ တစ်မျိုးတည်းနဲ့ သမီးပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင် ဤသုဿာန်မှာ မြှပ်နှံဖူးသတဲ့။ အဲဒီသမီးတွေသေတိုင်း ငိုခဲ့ရတဲ့ မျက်ရည်တွေဟာ ဟောဒီ အစိရဝတီမြစ်ရေမက ရှိရော့မယ်။ ငါကသာ သား သမီးလွမ်းလို့ငိုနေတာ ငါ့ကိုပစ်ခွာသွားသူ သားသမီး တွေက ငါ့ကို သတိတောင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သား သမီးတွေသေတိုင်း ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ ငါ့ဘဝ ဒီကနေ့မှစပြီး ငါမငိုတော့ဘူး။ ငိုနေလို့ကော ဘာအကျိုးထူး မှာလဲ။ သမီးတွေ တမ်းတငိုနေမည့်အစား ဘုရားရှိခိုး၊ ပုတီးစိပ်၊ တရားနာ ဘာဝနာပွားတာကမှ ကုသိုလ်ရဦး မယ်။ ကုသိုလ်ရရင် ငါ့စိတ်ချမ်းသာရတာပဲ။ ပုထုဇဉ်သဘာဝအရ သမီးလွမ်းစိတ်ပေါ်လာရင် ငါပွားများ အားထုတ်ထားတဲ့ ကုသိုလ်တွေ သမီးလေးချမ်းသာအောင် သာဓုခေါ်နိုင်အောင် အမျှဝေရုံပဲ ရှိတာပေါ့ဟု သတိ သံဝေဂရကာ နေ့စဉ်နေတိုင်း ကုသိုလ်တရား ပွားများမှုနဲ့သာ အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။ ရသမျှ ကုသိုလ်ကိုလည်း သမီးလေးအား အမျှပေးဝေ ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။ ဥဗ္ဗိရီကိုယ်တိုင်ကတော့ နောင်တစ်ချိန်မှာ ဘိက္ခူနီမဝတ်လို့ တရားအားထုတ်တဲ့အခါ ရဟန္တာ ထေရီမကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဝတ္ထုမှာ အဓိကပြောချင်တာက ဥဗ္ဗိရီ၏ သမီးထားတဲ့ မိဘမေတ္တာကို သိစေချင်တာပါ။ သမီးလေးမမွေးဖွားမီ ကလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အင်္ဂါပြည့်ပြည့်စုံစုံ မွေးဖွားဖို့မေတ္တာထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ သမီးလေး မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာလည်း သမီးလေးကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် မေတ္တာထားပြီး ဂရုစိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ သမီးလေးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်း မေတ္တာအပြည့်အဝ စေတနာ အပြည့်အဝ နဲ့ ကုသပေးခဲ့ကြောင်း၊ သမီးလေးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာလည်း တရားအသိမရခင် နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလို ဂရုဏာသက်ကာ ငိုကြွေးခဲ့တဲ့ သမီးပေါ်ထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ တရားအသိရသွားတဲ့အခါမှာလည်း သမီးလေး ကောင်းရာသုဂတိရောက်စေကြောင်း ကုသိုလ်များပြုလုပ်ကာ အမျှဝေပေးတဲ့ မိဘမေတ္တာကိုသိစေချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံးသော သူများလည်း မိမိကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ မမွေးဖွားမီထားခဲ့တဲ့မေတ္တာ၊ မွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန် ထားခဲ့တဲ့မေတ္တာ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါ ပြုစုယုယပေးတဲ့ မေတ္တာတရား၊စတဲ့ မိဘမေတ္တာကိုနားလည်စေချင်လိုကြောင်း အသိပေးလိုက်ရပါသည်။
စာဖတ်သူအားလုံး သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍ လိုရာဆန္ဒများ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းပြည့်ဝကြပါစေ။
၃၁ ဘုံ ကိုဒီလိုရေတွက်နည်း
ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုးစာအုပ်များတွင် အားလုံးနီးပါးသော အမျှဝေခြင်းများ၌ ၃၁-ဘုံသည် ပါဝင်လေ့ရှိသည်။သို့သော်၃၁ဘုံနှင့်ပတ်သက်၍သာမန်သိရှိခြင်းထက်သေအချာသိရှိကြမည်
ဆိုပါက ပိုမိုအကျိုးရှိနိုင်ပေသည်ဟု ယုံကြည်ပါသဖြင့် ၃၁-ဘုံ သိကောင်းစရာအကြောင်း ကိုရေးသားဖေါ်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤသြကာသလောကကြီးတွင် သတ္တ၀ါတို့၏နေထိုင်ရာဘုံဌာနမှာ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ ရှိသည်။
အပါယ် လေးဘုံ တို့ဖြစ်သည်။
ထို သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ တည်းဟူသော သြကာသလောကကြီးသည် အာသဝေါ ကုန်ခန်းပြီးသော ရဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှထက်အောက်ပြောင်းပြန်ဗလောင်ဆန်အောင်ကျင်လည်ရဦးမည့်ဘုံဌာနများ ဖြစ်သည်။
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားထားသောနခသိခသုတ်ကို ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့်လူ့ဘုံမှစုတေ၍ သေလွန်ကြ
ကုန်သောသူတို့တွင်လူ့ဘုံသို့ရောက်ရှိသောသူမှာ မြတ်စွာဘုရား၏လက်သဲခွံပေါ်၌ရှိသော မြေမှုန့်ပမာဏ
မျှသာရှိ၍အပယ်လေးဘုံသို့ ကျရောက် သောသူတို့မှာဂင်္ဂါမြစ်လွင်ပြင်ရှိ မြေမှုန့်ပမာဏ ရှိသည်။
လူ့ဘ၀မှစုတေ၍လူပြန်ဖြစ်သောပမာဏ နှင့်အပါယ်လေးဘုံသို့ကျရောက်သောသူတို့၏ပမာဏ နှိုင်းဆ၍
မရအောင် ကွာခြားလှပါသည်။လူတစ်ထောင်သေ၍ တစ်ယောက်မျှလောက်ပင်လူပြန်ဖြစ်ဖို့ရာမလွယ်ကူချေ။
ဗြဟ္မပါရိသဇ္ဇာ၊ ဗြဟ္မပုရောဟိတာ၊ မဟာဗြဟ္မာ ၊ (ရူပ ပထမဈာန် ၃- ဘုံ)
ပရိတ္တာဘာ၊ အပ္ပမာဏာဘာ၊ အာဘဿရာ၊ (ရူပ ဒုတိယဈာန် ၃- ဘုံ)
ပရိတ္တာသုဘာ၊ အပ္ပမာဏာသုဘာ၊ သုဘကိဏှာ၊ (ရူပ တတိယဈာန် ၃- ဘုံ)
ဝေဟပ္ဖိုလ် ၊ အသညသတ် ၊ အဝိဟာ ၊ အတပ္ပါ ၊သုဒဿာ၊ သုဒဿီ၊ အကနိဋ္ဌ၊ (ရူပ စတုတ္ထဈာန် ၇- ဘုံ)
အာကာသာနဉ္စာယတန၊ ၀ိညာဏဥစ္စာယတန၊ အာကိဉ္စာညာယတန၊နေဝသညာနာသညာယတန (အရူပဈာန် ၄- ဘုံ)
စတုမဟာရာဇ် ၊ တာဝတိံသာ ၊ ယာမာ ၊ တုသိတာ ၊ နိမ္မာနရတိ ၊ ပရနိမ္မိတ၀သ၀တ္တီ
ငရဲဘုံ ၊ တိရစ္ဆာန်ဘုံ ၊ ပြိတ္တာဘုံ ၊ အသူရကာယ်ဘုံ
1. မောင်ဝိဇ္ဖာ “ဗုဒ္ဓ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း”
2. ဓမ္မဒူတ အရှင်ဣန္ဒာဝုဓ “ခွဲခြားဝေဖန် ကိုးကွယ်ရန်(ရတနာမွန် မဂ္ဂဇင်း)”
3. အဘိဓမ္မတ္တသင်္ဂဟပါဌ် ဝီထိမုတ်ပိုင်း ဘူမိစတုက္က
*** မှတ်ချက် ***
Kyaw Moe Oo မှ March 16, 2012 12:47pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်
၁။ ဘုရားရှင်အားလှူဒါန်းခြင်း
၂။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါတို့အားလှူဒါန်းခြင်း
၃။ ဘုရားတပည့်သား ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
(သို့) အရဟတ္တဖိုလ်၌တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
၄။ အရဟတ္တဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် ကျင့်ကြံနေသောပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
(သို့) အရဟတ္တမဂ်၌တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
၅။ အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
(သို့) အနာဂါမိဖိုလ်၌တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
၆။ အနာဂါမိဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် ကျင့်ကြံနေသောပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
(သို့) အနာဂါမိမဂ်၌တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
၇။ သကဒါဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
(သို့) သကဒါဂါမိဖိုလ်၌တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
၈။ သကဒါဂါမိဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် ကျင့်ကြံနေသောပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
(သို့) သကဒါဂါမိမဂ်၌တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
၉။ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
(သို့) သောတာပတ္တိဖိုလ်၌တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်အားလှူဒါန်းခြင်း
၁၀။ သောတာပတ္တိဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြဲုရန် ကျင့်ကြံနေသောပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
(သို့) သောတာပတ္တိမဂ်၌တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား လှူဒါန်းခြင်း
၁၁။ သာသနာပ အခါ ဈာန်အဘိညာဉ်ရသော ရသေ့တို့အား လှူဒါန်းခြင်း
၁၂။ သီလရှိသော လူ ပုထုဇဉ်တို့အား လှူဒါန်းခြင်း
၁၃။ သီလမဲ့သော လူ ပုထုဇဉ်တို့အား လှူဒါန်းခြင်း
၁၄။ တိရစ္ဆာန်တို့အား လှူဒါန်းခြင်း
လင်္ကာ။ ။ ဘုရားမြတ်စွာ၊ ပစ္စေကာနှင့်၊ ရိယာရှစ်ဝ၊ ဈာန်ရ ဗာဟီ၊ နှစ်လီ ပုထုဇဉ်၊ တိရစ္ဆာန်၊ လှူခံ တစ်ကျိပ်လေး။
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အားလုံးကို လေအားမှ ထုတ်ယူရန် ရည်ရွယ်
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသည် ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် အစားပြန်ရနိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှ စွမ်းအင် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ထုတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် ၁၀၀ ရာခိုင်နငန်း ထုတ်ယူရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။
ဒိန်းမတ်အစိုးရသည် ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွက် သဘာဝစွမ်းအင်ထုတ်ယူရေးနှင့် ကာဘွန် လျှော့ချရေး သတ် မှတ်ချက်များကို တိုးမြှင့်လိုက်သည်။ ထို့ပြင်၊ ချမှတ်ပြီးခဲ့သမျှ သဘောတူညီချက်များတွင် ဤစီမံကိန်းသည် အကြီးမားဆုံး၊ သဘာဝနှင့် အညီညွတ်ဆုံး၊ အတာရှည်ဆုံး သဘောတူညီချက်အဖြစ် ထောပနာပြုလိုက်သည်။
တိုင်းပြည်မှာ ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ မသုံးတော့ရန် ရည်စူးသောအားဖြင့် ချမှတ်ထားသော ရည်မှန်းချက်သစ်များကို လွှတ်တော်က သဘောတူ လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၏ ရာသီဥတု၊ စွမ်းအင်နှင့် အဆောက်အဦးများ ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဖြစ်သူ မာတင်လစ်ဒီဂါး (Martin Lidegaard)က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ရည်ရွယ်ထားသည်မှာ ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို (၂၀၂၀)ခုနှစ်တွင် (၁၉၉၀)ခုနှစ် ထုတ်လွှတ်မှု၏ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချရန်နှင့် လောင်စာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုမူ (၂၀၀၆)ခုနှစ် သုံးစွဲမှု၏ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ကျော် လျှော့ချပစ်ရန် ဖြစ်သည်။
စွမ်းအင် စုစုပေါင်း၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အစားပြန်ရနိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှနေ၍ ထုတ်ယူရန်နှင့် ရရှိမည့်စွမ်းအင် ထက်ဝက်ကို လေအင်အားထုတ်ယူရေးလုပ်ငန်းများမှနေ၍ ထုတ်ယူရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားသည်။ သဘောတူချက်တွင် အစားပြန်၍ရနိုင်သော အပူဓါတ်ထုတ်လုပ်မှု၊ ခေတ်မီလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပို့ဆောင်ရေး စနစ်(smart grids)၊ ဇီဝဓါတ်ငွေ့နှင့် အခြားသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ညီညွတ်သော နည်းပညာ များကို တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်း ပါရှိသည်။
“ဒိန်းမတ်နိုင်ငံဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဆီ ကူးပြောင်းရာမှာ ကမ္ဘာ့ရှေ့ဆောင်တိုင်းပြည် ဖြစ်လာပြန်အုံးတော့မယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ဟာ အနာဂတ်မှာ ရေနံနဲ့ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ ဈေးနှုန်းတွေ မြင့်တက်လာမယ့် အရေးအတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် ခုချိန်မှာရော၊ လာမယ့်နှစ်တွေမှာရော ကျနော်တို့မှာ ဖန်တီးပေးဖို့ အလွန်တရာ လိုအပ်နေတဲ့ အ လုပ်နေရာတွေကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ”ဟု လစ်ဒီဂါးက ဆိုပါသည်။
ဤသဘောတူချက်ကြောင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသည် (၂၀၅၀)ခုနှစ်တွင် အစားပြန်ရနိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှ နေ၍ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထုတ်ယူကာ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးလုပ်ငန်း၊ အပူပေးရေးလုပ် ငန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတို့အပါအ၀င် လုပ်ငန်းများအတွက် စွမ်းအင်ထောပ်ပံ့ နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ဤ စီမံကိန်းသည် ဈေးနှုန်း မတည်ငြိမ်သော ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများအပေါ် အားထားနေရမှုကို သက်သာ စေသည်။ ဤသို့ဖြင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲသူများအဖို့ စွမ်းအင် ကုန်ကျစားရိတ်မြင့်တက်မလာအောင် တားဆီးပေး နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း လစ်ဒီဂါးက ပြောသေးသည်။
ဤ စီမံကိန်းသည် ဥရောပသမဂ္ဂ၀င်နိုင်ငံများ၏ လက်ရှိ ကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေးလျာထားချက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှနေ၍ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်ရေး ကြိုးပမ်းမှုကိုလည်း အားပေးရာရောက်နိုင်ပါသည်။
မတ်လ စောစောပိုင်းက ပိုလန်တနိုင်ငံတည်းသာ ဤအလှည့်အပြောင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်မဲပေး ခဲ့သည်။ ဤစီမံကိန်းမျိုးကို အခြားတိုင်းပြည်များ ဦးစွာချမှတ်သည်အထိ ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများ စောင့်စား နေသင့်သည်ဟု ဆိုသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ မောင်သိရီ on Friday, 13 April 2012
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ စပ်မိစပ်ရာ |
အမျိုးသားအဆင့် စစ်တမ်းအရ ဗြိတိန် အွန်လိုင်း အိုးပန်းတက္ကသိုလ် Open University မှာ အဆင့် ၃ နေရာတွင် ရှိနေလေသည်။ တက္ကသိုလ်၏ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဖြစ်သူ မာတင်ဘင်းက ကျေနပ်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ပြောကြားလိုက်သည်။
လက်ရှိ ဘွဲ့သင်တန်း ကျောင်းသား ၂ သိန်း ၆ သောင်းကျော်တို့ သင်တန်းကြေးငွေပေးပြီး တက်ရောက်နေသည့်အပြင် နိုင်ငံတကာမှလည်း အခမဲ့ ဘာသာရပ်တို့ကို လေ့လာလျက်ရှိနေလေသည်။ ဤအညွန်းကိန်းများအရ သိသာနိုင်ပါသည်။
များမကြာမီမှာတင် ဘာသာရပ်တို့ကို လေ့လာရန် ဒေါင်းလုပ်လုပ်သူ ၅ သန်းပြည့်တော့မည်။ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဗြိတိန်ပြင်ပ တိုင်းပြည်များက ဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော် အောက်စဖို့နှင့် ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကြားနေရာတွင် OU မှာ တည်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဘွဲ့သင်တန်းတို့ကို အွန်လိုင်းလေ့လာရာတွင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သင်ယူလေ့လာနိုင်ကြခြင်း၊ သင်ကြားပို့ချနိုင်ခြင်းတို့ ရှိနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သုတေသနအရလည်း ထောက်ခံလျက်ရှိနေသည်။
မမျှော်လင့်ထားသည့် အချက်များမှာလည်း OU က အောင်မြင်မှု ရရှိနေလေသည်။ research သုတေသနလေ့လာမှုများတွင်လည်း ဗြိတိန်၏ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် ၃ ခုတွင် OU ပါရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
"စတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးနေ့ကတည်းကကို OU ဟာ ကြီးထွားလာနိုင်ပြီး အောင်မြင်နိုင်စွမ်း ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သိထားခဲ့ပါတယ်။" ဒု-ပါမောက္ခချုပ်က ဆိုပါသည်။
"OU တွင် ကိုယ်ပိုင်သုတေသနလုပ်မှုတွေကနေ သင်ကြားမှု- သင်ယူမှုနည်းလမ်းတွေနဲ့ သင်ထောက်ကူတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေး ပါတယ်။ သုတေသနရလဒ်တွေရဲ့ အကျိုးက တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်။ သင်ကြားမှုအပေါ် အများကြီး သက်ရောက်မှု ရှိနေတယ်။"
မဲလဘုန်းမြို့ဇာတိဖြစ်သူ Mr. Bean က သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတိုးတက်ထွန်းကားလာမှုကြောင့် ပညာရေးမှာ လူတိုင်း လက်လှမ်းမီသည့် အရာဖြစ်လာကြောင်းဆိုပါသည်။
ဆရာ-ကျောင်းသား အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ပြီး သင်ယူခြင်း-သင်ကြားခြင်းတို့လည်း ပြုလုပ်နိုင်သော အွန်လိုင်းတက္ကသိုလ် ဘွဲ့သင်တန်းများဖြစ်သည်။ လက်ရှိ နည်းပြဆရာကျူတာ ၇ ထောင်ကျော်ရှိနေကြောင်း မစ္စတာဘင်းကဆိုပါသည်။
"ကျောင်းသားတိုင်းကို ဘာသာရပ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ကျူတာ တစ်ဦးစီထားပေးပါတယ်။ ဆရာ-ကျောင်းသား အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ ဆွေးနွေးမှု၊ သင်ခန်းစာလေ့လာမှုတွေက သိပ်ကို အားရစရာကောင်းလှတယ်။ ပညာရဲ့ အနှစ်သာရကို ဖေါ်ကျူးနိုင်ပါတယ်။"
လူဦးရေ ၄.၄ သန်းရှိတဲ့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာ ၀ိုင်၊ သိုးမွှေးနဲ့ လှပတဲ့ သဘာဝရှုမြင်ကွင်းတွေကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်း နယူးဇီလန်အစိုးရက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗြိတိန်နဲ့ ဩစတြေးလျတို့လို အရည်သွေးမှီ အဆင့်မြင့် ပညာရေးဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားကျောင်းသားတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့သည်။
အခု နယူးဇီလန်က နိုင်ငံတကာကို ပညာတင်ပို့မှု (education export) မှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၅ နေရာကို ရောက်ရှိလာသည်။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေကို အဆင့်မြင့်ပညာ ရောင်းချမှုဖြင့် တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလီယံ ရရှိနေသည်။
နယူးဇီလန် အစိုးရက နောက် ၁၅ နှစ်အတွင်း ပညာရောင်းချမှုဖြင့် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး နှစ်ဆတိုးစေဖို့အတွက် တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဘတ်ဂျက်မြှင့်သုံးခြင်း၊ အင်စတီကျူးရှင်းတွေ နိုင်ငံတာအဆင့်မှီအောင် ပြုပြင်ခြင်း၊ တနိုင်ငံလုံး ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အင်အားစု အဆင့်ရောက်အောင် မြှင့်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နေသည်။
ဒါပေမဲ့ နယူးဇီလန်အတွက် အဓိကစိန်ခေါ်မှုက အိမ်နီးချင်း ဩစတြေးလျဖြစ်သည်။ ဩစတြေးလျက နှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတို့ ကျက်စားရာ ဒေသကြီးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် တက္ကသိုလ်တွေကို အိမ်နီချင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုနိုင်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ အစိုးရက နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ကြိုးစားသည်။ နယူးဇီလန် ဗီဇာကို လွယ်လွယ်ကူကူရအောင် သက်ဆိုင်သံရုံးတွေက စီစဉ်ပေးသည်။ နိုင်ငံတကာ Ph.D ကျောင်းသားတွေအတွက် ကျောင်းစရိတ် လျော့ချပေးထားသည်။
နယူးဇီလန်တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကောလိပ်တွေမှာ နိုင်ငံတကာကျောင်းသား ၁ သိန်းကျော်ရှိသည်။ အစိုးရက ၂၀၂၅ မှာ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသား ၂ သိန်းအထိ တိုးတက်လာစေဖို့ ပြင်ဆင်နေသည်။ မနှစ်က အစိုးရက ‘နယူးဇီလန် ပညာရေး အေဂျင်စီ’ ထောင်ပြီး၊ ဒ်ါလာ ၁၀ သန်း အကုန်ကျခံကာ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ပညာရေး ပရိုမိုးရှင်းပွဲတွေ လုပ်ခဲ့သည်။
သို့နှင့်တိုင် နယူးဇီလန် အနေဖြင့် ဩစတြေးလျနဲ့ယှဉ်ရင် နိုင်ငံတကာ ပညာရေးဈေးကွက်မှာ မျက်နှာသာရမှု အားနည်းသေးသည်။ တစ်ဖက်က အမေရိကန်တက္ကသိုလ်တွေကလည်း ဈေးကွက် အရမ်းမြှင့်လာတဲ့အတွက် စိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်လာပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုက ပိုပြင်းထန်လာသည်။
ဒါကြောင့် ဈေးကွက်ချဲ့မှု နိုင်ငံရပ်ခြားကျောင်းသား စုဆောင်းမှုတွေ ကြိုးစားလုပ်လာရသည်။ အာရှ၊ အာဖရိကနိုင်ငံတွေကို ပတ်ပြီး ကျောင်းသား စုဆောင်းရသည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားတွေက အခြားကို ရွှေ့ပြောင်းမှုနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှု များလာတဲ့အတွက် အစိုးရက နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေကို ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဖြစ်အောင်မွေးပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးရသည်။
အစိုးရက ပြင်ပကျောင်းသားတွေ ဘွဲ့ရပြီး ဆက်နေစေဖို့ အလုပ်ရှာခွင့် တစ်နှစ်ဗီဇာ ထုတ်ပေးသည်။ အရည်အချင်းနဲ့ ထိုင်သင့်တဲ့ အလုပ်ရသွားရင်၊ အလုပ်အတွေ့အကြုံရယူဖို့ ဗီဇာ ၃ နှစ် ထပ်ထုတ်ပေးသည်။ လက်ရှိ နယူးဇီလန် ပညာရေးရဲ့ အဓိက ဖောက်သည်တွေက တရုတ်၊ ဂျပန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားတို့ ဖြစ်သည်။ အာစီယံနိုင်ငံတွေက ကျောင်းသားတွေကို ဆက်ပြီး စုဆောင်းနေသည်။
Auckland University of Technology ဆိုရင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတကာကျောင်းသား ၈၀၀ ရှိရာက ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ၂၄၀၀ အထိ တိုးလာသည်။ Victoria University of Wellington ဆိုရင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ က ကျောင်းသား ၃၀၀၀ ကျော် ရှိသည်။ ကျောင်းသားအများစုက တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ မလေးရှားနဲ့ ဗီယက်နမ်တို့မှ ဖြစ်သည်။
နယူးဇီလန်တက္ကသိုလ်တွေမှာ ပညာသင်စရိတ်က ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပြည်တွင်းကျောင်းသားအတွက် တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ ကနေ ၅၀၀၀ ကြား ရှိသည်။ ပြည်ပကျောင်းသားအတွက် တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၂၂,၀၀၀ ကနေ ၂၄,၀၀၀ ကြားရှိသည်။ တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေဆီက ငွေနဲ့ လည်ပတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ပညာရေး |
ဂလိုဘယ်ခေတ်အတွက် စင်္ကာပူရဲ့ လစ်ဘရယ် ပညာရေး
Published on Thursday, 12 April 2012 14:37
Written by ၀င့်ထန်း
စင်္ကာပူ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် (NUS) က အမေရိကန် ယေးလ် တက္ကသိုလ်နဲ့ တွဲဖက်ပြီး မကြာခင်က (Yale-NUS College) ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ စင်္ကာပူမှာ လွတ်လပ်မှုရှိတဲ့ ပထမဆုံး liberal arts ကောလိပ် ဖြစ်လာပါတယ်။
အမှန်အားဖြင့် ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုတာ လွတ်လပ်မှု အပြည့်အ၀ ရှိရပါမယ်။ သုတေသန လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ စာတမ်းတွေက အစိုးရမူဝါဒတွေကို လိုအပ်ရင် ပွင့်ပွင့်လင်း ဝေဖန်ထောက်ပြရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ စင်္ကာပူဟာ အာဏာရှင်တစ်ပိုင်း နိုင်ငံဖြစ်တာမို့ ပညာရေးမှာ အကန့်အသတ်တွေ ရှိပါတယ်။
အခု စင်္ကာပူမှာ ဖွင့်တဲ့ ယေးလ်တက္ကသိုလ်ဟာ ပညာရေးလွတ်လပ်မှု အပြည့်အ၀ ရနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ အနောက်နိုင်ငံ ပညာရှင်တွေအကြားမှာ အငြင်းပွားနေပါတယ်။ အဲဒီအပေါ် CNN နဲ့ တိုင်းမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ဖားရဒ် ဇာကာရီးယား ကတော့ သူ့အမြင်ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောပါတယ်။
စင်္ကာပူဟာ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အနောက် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်း အစဦးပုံစံနဲ့ သိပ်မကွာခြားပါဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေလည်း ယခုအနေအထားကို ရောက်ရှိဖို့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်ဆင့်နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။
အခု စင်္ကာပူဟာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် တံခါးဖွင့်ထားတယ်၊ လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက်ကို ထွေးဖက်ထားတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အဂတိလိုက်စားမှု အနည်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် အမြဲသတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကိုကြည့်ရင် တံခါးပိုဖွင့်လာတာ တွေ့ရတယ်။
အဲဒီတံခါးဖွင့်ဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် စင်္ကာပူက liberal arts ကောလိပ်ကို ဖန်တီးဖို့ ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ တက္ကသိုလ်နှစ်ခု ပူးတွဲမှုနောက်မှာ အသွင်သဏ္ဍန်မတူတဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ ပညာရပ်ဌာနတွေ၊ ပြင်ပဆရာတွေနဲ့ ဒေသခံဆရာတွေကြား အမြင်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီအခြေအနေတွေကပဲ စင်္ကာပူဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လစ်ဘရယ်လစ်ဇင် အကြောင်းအရာတွေကို တပွန်းတနှီး ထိတွေ့ ဆက်ဆံလာမယ့် အာရှရဲ့ စံပြနေရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက် ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေက ယေးလ်မှာထက် စင်္ကာပူမှာ ပိုမြိုင်ဆိုင်လာမယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စင်္ကာပူမှာ ထိပ်ပိုင်းရာထူးကြီးကြီး ယူမယ့်သူတွေဟာ အနောက်တက္ကသိုလ်တွေကနေ ပညာဆည်းပူးထားသူတွေ ဖြစ်လာမှာကြောင့်ပါပဲ။
စင်္ကာပူဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေ သင်ယူစရာ အများကြီးရှိပါတယ်။ NUS တက္ကသိုလ်ကလည်း ယေးလ်တက္ကသိုလ် ဆီကနေ သင်ယူစရာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ကျနော်တို့အမေရိကန်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ လစ်ဘရယ်နဲ့ စိတ်တံခါးဖွင့် ပညာရေးဖြစ်တဲ့အတွက် အမေရိကန်တွေလည်း စင်္ကာပူဆီက တစ်စုံတစ်ရာ သင်ယူစရာရှိမှာပါပဲ။
နောက်ဆုံး ယေလ်းတက္ကသိုလ်နဲ့ စင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဂလိုဘယ်လွှမ်းခြုံနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပညာရေးအတွက် စဉ်းစားတွေးတောနိုင်မယ့် နည်းလမ်းအသစ်တွေ သင်ကြားပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source: CNN; A global education foraglobal age
လောကရှိ လူသားတို့သည် ချမ်းသာတယ်။ ဆင်းရဲတယ်စသည်ဖြင့်
အမျိုးမျိုးပြောနေကြသော်လည်း တကယ့်အစစ်အမှန်ချမ်းသာသည် (၄)မျိုးပင်
၁။ သူတစ်ပါး နှစ်သက်တပ်မက်လောက်၍ လုယက်ခိုးယူနိုင်သော
ပစ္စည်းဥစ္စာများ မရှိသူသည် သူ့မှာ သိမ်းဆည်းသိုးမှီစရာမလိုသောကြော
စိတ်ပူပန်ပူမရှိ၊ သွားချင်ရာသွားနိုင်ပြီး နောက်ကိုလှည့်ကြည့်
စိတ်လွတ်လပ် ပေါ့ပါးသော ချမ်းသာသုခ။
၂။ မိမိမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံ၍ လှူချင်တိုင်းလှူ၊
ပေးကမ်းချင်တိုင်း ပေးကမ်းနိုင်ကာ သုံးချင်သလိုသုံးနိုင်သော ချမ်းသာသုခ။
၃။ သူတစ်ပါးကို ပေးကမ်းနိုင်အောင်လည်း မချမ်းသာ၊ သူတစ်ပါးထံမှ
အကြွေး ယူလောက်အောင်လည်း မဆင်းရဲဘဲ အလယ်အလတ် သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ
နေနိုင်စားနိုင်၍ အကြွေးမတင် အကြွေးတောင်းခံရခြင်းမှ
၄။ မကောင်းမှုလုပ်ပြီးမှ စားရေးဝတ်ရေး နေရေးထိုင်ရေး
အဆင်ပြေမှာမဟုတ်၊ လူ့ဘ၀လေးရရှိချိန်မှာ မကောင်းမှုလုပ်မှ အသက်ရှင်
နေထိုင်ရမည်ဆိုတာ လက်မခံဘဲ အသက်ရှည်နေတဲ့ လူ့ဘ၀လေးကို မကောင်းမှုမလုပ်ဘဲ
အသက်ရှင်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ မကောင်းမှုမှရှောင်ကြဉ်သော ချမ်းသာသုခ။
လူသားတိုင်းတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ချမ်းသာ(၄)မျိုးအနက်
တစ်မျိုးမျိုးသော် လည်းကောင်း နှစ်မျိုးသော်လည်းကောင်း ချမ်းသာသုခနဲ့
ပြည့်စုံနေသော ပုဂ္ဂိုလ်များချည်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်၍ မိမိမှာ
ချမ်းသာသုခ ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါ။
သို့ရာတွင် တကယ်ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀လေးရရှိနေချိန် သိနိုင်ခဲတဲ့
အသိဉာဏ်ဗဟုသုတများ ရှိနေတဲ့လူ့ဘ၀လေး တခဏတာ ရှင်သန်နေချိန်တွင်
အထက်ပါချမ်းသာ(၄)မျိုးမှ နံပါတ်(၄)အချက်ကို အဓိကထား၍
ပြည့်စုံအောင် လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန် အထူးလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
တကယ်တော့ လူ့ဘ၀ဆိုတာ ခဏလေးပါ။ ဒီခဏတာ ရနိုင်ခဲတဲ့ ဘ၀လေးမှာ
မိမိအတွက်ပါမည့် ကောင်းမှုများမလုပ်ဘဲ မကောင်းမှုများလုပ်ပြီး
ကုန်ဆုံးသွားမည်ဆိုလျှင် လူသားတို့ကိုလည်း အကျိုးမပြု မိမိကိုယ်ကိုလည်း
အကျိုးမရှိ၍ အလဟဿ ဆန်ကုန်မြေလေးသော လူသားတစ်ဦးဖြစ်ကာ လူ့ဘ၀၏တန်ဖိုး နှမြောစရာ
နောင်တဆိုတာ နောင်မှရတတ်၍ နောင်တလို့ခေါ်ဆိုသော်လည်း သတိမရှိ
တရားမရှိ ဉာဏ်ပညာနည်းပါးသူတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စကားလုံးဟု သတ်မှတ်ကာ
ငါသည် လူ့ဘ၀၏တန်ဖိုးကို ဒု၊ သ၊ န၊ သော
သူဌေးသားလေးယောက်ကဲ့သို့ နောက်ဘ၀ မကောင်းကျိုးခံစားရမှ နောင်တမရအောင် ယခု
ရနေတဲ့လူ့ဘ၀လေးကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချမည့်ဟု စိတ်ဆန္ဒများ ဆုံးဖြတ်ကာ
Prev: ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ သိသင့်သော ဘာသာရေး အမေး+အဖြေ (2) ဘဒ္ဒန္တတိလောကသာရ.ဖြေသည်
Next: သြကာသ နှင့် ဆုတောင်းအဖွင့်
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ဆောင်းပါး |
ဗုဒ္ဓဂယာ မဟာဗောဓိ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ဒီလောကအတွင်း ဘာသာမတူ အယူကွဲ ဝါဒကွဲတဲ့ ကိုးကွယ်မှုတွေ မျိုးစုံရှိကြပြီး ဘာသာအသီးသီးတို့ရဲ့ အထွဋ်အမြတ်နေရာတွေလည်း အသီးသီးရှိကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အထွဋ်အမြတ်နေရာတွေကတော့
(၁) ဘုရားအလောင်းတော် မွေးဖွားခဲ့တဲ့ လုမ္ပိနီ၊
(၂) ဘုရားဖြစ်ရာ မဟာဗောဓိ၊
(၃) တရားဦးဟောရာ မိဂဒါဝုန်၊
(၄) ပရိနိဗ္ဗာန်စံရာ ကုဿိန္နာရုံ ဖြစ်ကြပြီး သံဝေဇနိယ လေးဌာန (သံဝေဂပွားများရာ နေရာ) အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့တယ်။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီသံဝေဇနိယ လေးဌာနကို ဘုရားဖူးရောက်လာသူ အမျိုးကောင်းသား အမျိုးကောင်းသမီးများဟာ ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ သုဂတိကို ရောက်နိုင်တယ်လို့ ဟောထားပါတယ်။
ဒီသံဝေဇနိယလေးဌာနထဲမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘီဟာပြည်နယ်၊ ဂယာမြို့အနီးမှာ ရှိတဲ့ မဟာဗောဓိကတော့ ထူးမြတ်တဲ့ နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့် ထူးမြတ်သလဲဆိုရင် ကမ္ဘာလောကကြီး စတင်ဖြစ်ထွန်းတုံးက ဒီကမ္ဘာလောကမှာ ဘုရားပွင့်တဲ့ ကမ္ဘာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ဒီမဟာဗောဓိမြေနေရာမှာ ကြာပန်းပွင့် မပွင့်ကို ဗြဟ္မာတွေက လာကြည့်ကြတယ်။
မဟာဗောဓိဂန္ဓကုဋိကျောင်းအတွင်းရှိ ဗုဒ္ဓဂယာ ရုပ်ပွားတော်
ကြာပန်း တစ်ပွင့်ပွင့်ရင် ဘုရားတစ်ဆူ၊ နှစ်ပွင့်ပွင့်ရင် ဘုရားနှစ်ဆူပေါ့။ အခုကမ္ဘာကတော့ ကြာပန်း ငါးပွင့်ပွင့်လို့ ဘုရားငါးဆူပွင့်တဲ့ ဘဒ္ဒကမ္ဘာလို့ခေါ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကမ္ဘာမြေကြီး စတင်ပေါ်ထွန်းတဲ့နေရာဟာ ဒီမဟာဗောဓိဖြစ်သလို ကမ္ဘာကြီး မီလောင်ပျက်စီးတဲ့အချိန်ရောက်ရင်လဲ ဒီမဟာဗောဓိမြေဟာ နောက်ဆုံးမှ မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့ နေရာလဲဖြစ်တယ်။ (ကမ္ဘာလောကကြီး ဖြစ်ပုံ တည်ပုံ ပျက်ပုံကို ဘုရားဟောနဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်များ အယူအဆ တူပုံကို နောက်မှ တင်ပြပါ့မယ်)။ ဒီမဟာဗောဓိမြေနေရာဟာ ဘုရားရှင်တိုင်း ပွင့်တော်မူတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဗောဓိပင်ပေါက်ရာဒေသ၊ အပရာဇိတပလ္လင်တည်ရှိရာဒေသဖြစ်လို့ ထူးမြတ်တဲ့နေရာပါ။ နောက်ပြီး အဝိဇဟိတဌာန (ဘုရားရှင်တိုင်း မစွန့်တဲ့ဌာန (၀ါ) ပစ်မထားတဲ့ဌာန) လို့လဲဆိုတယ်။
ဗောဓိပင်နဲ့ အပရာဇိတပလ္လင် တည်ရှိရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဗုဒ္ဓဂယာလို့ခေါ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဂယာဟာ ယခု အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီဟာပြည်နယ်၊ ဂယာမြို့နဲ့ (၇) မိုင်ကွာ ဝေးပြီး ကိုးလ်ကတ္တားမြို့နဲ့ ၂၉၂ မိုင်ကွာ ဝေးတယ်။ ဂယာမြို့ရဲ့ ရထားဘူတာကနေ ဗုဒ္ဓဂယာကို တက္ကစီနဲ့လာနိုင်သလို မြင်းလှည်းနဲ့လဲ လာလို့ ရပါတယ်။ အခု ဂယာမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်လည်း ဖွင့်လှစ်ထားပြီဖြစ်လို့ သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေလာနေပါပြီ။ ရှေးတုံးကတော့ ဗောဓိမဏ္ဍဝိဟာရလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ မဟာဗောဓိကျောင်းပေါ့။
ဗုဒ္ဓဂယာဒေသဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အထွဋ်အမြတ်နေရာအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ရှိခဲ့တယ်။ အေဒီ ၂ ရာစုမှာ အသောကမင်းကြီးက ဗောဓိညောင်အနီး ဦးစွာကျောင်းဆောက်ခဲ့ပြီး ခေတ်အဆက်ဆက် ဆက်လက် ပြုပြင်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ ရာစုနှစ်တွေနဲ့အတူ ပုံစံတွေလည်း ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ အေဒီ ၆ ရာစုလောက်မှာ သဲသောင်ပြင်တွေလဲ ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ တိဘက်သမိုင်းမှတ်တမ်းအရ အေဒီ ၁၂၃၄ ခုမှာ တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီး ဓမ္မဆွာမိန်ရဲ့ မှတ်တမ်းအရ သူဒီနေရာကို ရောက်တဲ့အချိန် ရဟန်းတော် ၄ ပါးသာ မြင်ရပြီး သဲသောင်ပြင်တွေ ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ၁၂၈၆ ကနေ ၁၅ ရာစုအထိ သီရိလင်္ကာက ဒီကျောင်းတော်ကို များစွာထောက်ပံ့ ပြုစုခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ကွယ်ပျောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဟိန္ဒူဘာသာတွေ ကြီးစိုးလာကြပြီး ဗုဒ္ဓဂယာဒေသလည်း မဟန့်ဘုန်းကြီး ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ လက်ထဲ နှစ်ပေါင်း သုံးရာကျော် ကျရောက်သွားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအချိန် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဗုဒ္ဓဂယာကို လာဖူးဖို့အတွက် အခက်အခဲများစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ အိန္ဒိယအစိုးရက ၁၉၄၉ ခု ကျောင်းကန်ဘုရား တည်ဆောက်ရေး အက်ဥပဒေအရ ၁၉၅၃ ခု မေလ ၂၈ ရက်မှာ ဗုဒ္ဓဂယာဒေသပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အထွဋ်အမြတ်နေရာဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဂယာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လက်ထဲ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာအောင် အဓိကစွမ်းဆောင်သူကတော့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသား အနာဂါရိကဓမ္မပါလ ပဲဖြစ်တယ်။
အင်္ဂလိပ်တွေ အိန္ဒိယကို အုပ်ချုပ်စဉ်က သီဟိုခေါ် သီရိလင်္ကာလည်း အင်္ဂလိပ်ရဲ့ အင်ပါယာလက်အောက် ကျရောက်ကာ မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲ အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်က အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ အနာဂါရိကဓမ္မပါလ အိန္ဒိယကိုရောက်လာပြီး ဘုရားလာဖူးတဲ့အချိန် (အင်္ဂလိပ်ခေတ်) ဒီဗုဒ္ဓဂယာကို ကြီးစိုးနေတာက မဟန့်ဟိန္ဒူဘုန်းကြီး တွေဖြစ်တယ်။ အဲဒါကို မြင်ရတော့ အနာဂါရိကဓမ္မပါလ အတော့်ကို စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်။ မဟန့်တွေက သူ့ကို ကောင်းမွန်စွာ ဘုရားဖူးခွင့်မပေးဘူး။ မောင်ထုတ်ခံခဲ့ရ၊ အရိုက်ခံခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အနာဂါရိကဓမ္မပါလက မဟာဗောဓိညောင်ပင်အောက်မှာ သံမဏိအဓိဋ္ဌာန်တစ်ခု ချခဲ့တယ်။ “ဒီမဟာဗောဓိ အထွဋ်အမြတ် မြေနေရာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးတို့ရဲ့ နေရာ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ငါသည် အသက်စွန့်ပြီး ကြိုးစားဆောင်ရွယ်မယ်” လို့ အဓိဋ္ဌာန်ပြုကာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်၊ တရားရုံးကို အခေါက်ပေါင်းများစွာ တက်ခဲ့ရပါတယ်။ မဟာဗောဓိအသင်းကြီးကို ထူထောင်ပြီး ဗုဒ္ဓဂယာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်စေရမယ်လို့ ကြိုးစားသွားတာ ၁၉၃၁ ခု သူသေဆုံးသွားတဲ့အထိ ပါပဲ။ (အနာဂါရိကဓမ္မပါလကို သီရိလင်္ကာသူရဲကောင်းလို့ခေါ်သလို ဒုတိယ အသောကလို့လဲ အခေါ်ခံရတယ် သူ့အကြောင်းကို နောက်မှ တင်ပြပါ့မယ်)။ အနာဂါရိကဓမ္မပါလရဲ့ ကြိုးစားမှုကြောင့် ယခု မဟာဗောဓိ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၄ ဦးနဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၅ ဦး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်။ ၂၀၀၂ ခုမှာတော့ မဟာဗောဓိကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှု စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ရတယ်။
ဗုဒ္ဓဂယာဟာ နေရဉ္စရာမြစ် (ယခုဖာကူမြစ်) ကမ်းနံဘေးမှာ တည်ရှိပြီး ဘုရားရှင် ရေသပ္ပါယ်ခဲ့ဖူးတဲ့မြစ်၊ တစ်သိန်းတန် ရွှေခွက်ကို မျောခဲ့ဖူးတဲ့မြစ်ဖြစ်တယ်။ မိုးရာသီမှာ မြစ်ရေတွေ လျှံတတ်ပေမယ့် ကျန်တဲ့အချိန်မှာ သဲချောင်းကြီး တစ်ချောင်းဖြစ်နေတယ်။
မဟာဗောဓိစေတီတော်ရဲ့ အမြင့်ကတော့ ၅၄ မီတာ (ပေ ၁၈၀) မြင့်ကာ အေဒီ ၂ ရာစုကတည်းက တည်ထားဟန်တူပါတယ်။ အေဒီ ၃ ရာစုမှာတော့ အသောကမင်း ပြန်လည် ပြုပြင်ထားတယ်လို့ သမိုင်းမှတ်တမ်းမှာ ဆိုထားတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ မင်းတုံးမင်းတြားကြီးလည်း မဟာဗောဓိပြုပြင်ရေးအတွက် ရွှေငွေကျောက်သံပတ္တမြားတွေ များစွာလှူလာခဲ့တယ်။ မင်းတုံးမင်းဇရပ်ဆိုတာလဲ ရှိခဲ့တယ်။ ယခု ဖူးတွေ့ရတဲ့ မဟာဗောဓိစေတီတော်ကတော့ အေဒီ ၇ ရာစု၊ ၈ ရာစုက လက်ရာတွေဖြစ်ပြီး စေတီရံတွေကတော့ အေဒီ ၁၂ ရာစုလက်ရာတွေ ဖြစ်တယ်။ စေတီတော်ရဲ့ အပေါ်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ရွှေအဆင်းဘုရားပုံတော်တွေကတော့ အေဒီ ၁၉ ရာစုအချိန် ပြန်လည် ဖြည့်စွက်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။
စာရေးသူတို့အဖွဲ့ မဟာဗောဓိ ရောက်စဉ် ၁၀.၀၂.၂၀၁၂
အခု မဟာဗောဓိပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတွေ အသီးသီး ပေါ်ထွက်လာနေပါပြီ။ ဘုရားဖူး အများဆုံး ရောက်လာကြတဲ့ အချိန်ကတော့ ဆောင်းဦးရာသီပဲဖြစ်တယ်။ အုပ်စုအများဆုံးနဲ့ လူစုအများဆုံး လာတာကတော့ တိဗက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဖြစ်တယ်။ သူတို့ တရုတ်နီလက်အောက်မှာ မနေချင်လို့ အိန္ဒိယမှာ အခြေချနေထိုင်ပြီး ပြည်ပအစိုးရဖွဲ့ထားနိုင်တဲ့ အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်။ ဆောင်းရာသီရောက်ရင် သူတို့နေတဲ့ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာ အေးလွန်းလို့တကြောင်း ဗုဒ္ဓဂယာမှာ ဆောင်းရာသီအချိန် ရာသီဥတု ကောင်းမွန်တာကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ ဒီအကြောင်းတွေကြောင့် တိဗက်ဘုရားဖူးတွေ သောင်းချီပြီး နှစ်စဉ်ရောက်လာကြတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ဘုရားဖူးတွေလည်း အုပ်စုလိုက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘုရားလာဖူးခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာပြည်ဘုရားဖူးအဖွဲ့ကတော့ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းမှ အလာများတာတွေ့ရတယ်။ ခုတော့ မြန်မာပြည် ဘုရားဖူးအဖွဲ့လည်း နှစ်စဉ် သောင်းဂဏာန်းနဲ့ ရှိနေပြီ။ ထိုင်ဝမ်၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ တခြားနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အနောက်နိုင်ငံသားတွေလည်း သူ့အုပ်စုနဲ့သူ ရောက်လာမစဲ တဖွဲဖွဲပါပဲ။
မဟာဗောဓိစေတီတော်ရဲ့ အောက်ခြေကတော့ ပြန်လည်တူးဖေါ်ထားတဲ့ အနေအထားဖြစ်လို့ နိမ့်တဲ့ အပိုင်းမှာ တည်ရှိတယ်။ စေတီတော်ထိပ်ကတော့ မြင့်ပါတယ်။ အဝေးကနေ လှမ်းမြင်ရကတည်းက စိတ်ကြည်နူးစရာ ကောင်းနေပြီ။ စေတီအနားရောက်လာလေ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ဆိုင်ခန်းလေးတွေ လည်း စည်စည်ကားကားနဲ့၊ ဈေးဆိုင်ကဖွင့်တဲ့ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ သီချင်းသံ၊ တိဗက်ဘုရားဝတ်ပြု သီချင်းသံတွေလည်း နားဝင်ချိုနေတယ်။ မဟာ ဗောဓိဘုရားဝင်းအတွင်းမှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ဘုရားရှိခိုးစာ မျိုးစုံနဲ့ ရှိခိုးကြသလို၊ ဘုရားရှိခိုးနည်းအမျိုးမျိုးကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး အဓိဋ္ဌာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပုတီးစိပ်ကြ၊ တရားဘာဝနာပွားကြတာတွေလည်း စုံလို့ပါပဲ။ ဒီနေရာကို ရောက်လာကြတဲ့သူတွေအားလုံးလဲ မေတ္တာစိတ်ကြောင့်လား၊ ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်ဓါတ်ကြောင့်လား နှစ်ခုစလုံးကြောင့်လား မပြောတတ်တော့ပါ။ စိတ်ထဲကို ငြိမ်းချမ်းသွားတော့တယ်။ ဗောဓိညောင်ရိပ်အပါအဝင် သစ်ပင်ရိပ်တွေကလဲ အေးချမ်းလှပါတယ်။ ဒီမဟာဗောဓိက ဘာကြောင့် အဲဒီလောက် ငြိမ်းချမ်းနေရသလဲလို့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ဘုရားဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့။ ဘုရားဖြစ်ပြီး ၄၉ ရက်တိုင်တိုင် ငြိမ်းချမ်းစွာ တရားနှလုံးသွင်းခဲ့လို့ အဲဒီတရားဓါတ်တွေ အခုထိ လွှမ်းခြုံနေတယ်လို့ စာရေးသူ ခံစားမိတယ်။
ဒီမဟာဗောဓိစေတီတော်ဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာဒေသရဲ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အသောကမင်းက သူ့ရဲ့ နန်းစံနှစ် (နန်းသက်) ဆယ်နှစ်မြောက်မှာ လာပြီး မွမ်းမံထားပါတယ်။ အသောကမင်းရဲ့နောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်း မင်းဆက်တွေက ဆက်လက် ပြုပြင်လာခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်စဉ်က မြန်မာဘုရင် မင်းတုန်းမင်းရဲ့ တောင်းဆို၊လှူဒါန်းမှုအရ အင်္ဂလိပ်မင်းတို့ကလည်း ပြုပြင်ခဲ့သေးတယ်။ မဟာဗောဓိစေတီရဲ့ အမြင့်ကတော (ပေ ၁၈၀) မြင့်ပြီး လေးဒေါင့်ပုံ စေတီဖြစ်ကာ အောက်ခြေဖိနပ်တော်ကြီးပြီး အထက်သို့ ချွန်တက်သွားတဲ့ပုံစုံဖြစ်တယ်။ ပန်းပု၊ ပန်းတော့၊ ပန်းတမော့၊ ပန်းရန်လက်ရာတွေက လက်ရာကောင်းမွန် တည်ကြည်လှတာ တွေ့ရတယ်။ မဟာဗောဓိစေတီတော်ဟာ နှစ်ထပ်စေတီတော်ဖြစ်ပြီး အောက်ထပ်မှာ ဘုရားဂန္ဓကုဋိကျောင်းဖြစ်ကာ လွန်စွာသပ္ပါယ် ကြည်ညိုစရာ အတိဖြစ်တဲ့ ထိုင်တော်မူ ဆင်းတုတော် တစ်ဆူကို ဖူးမဝနိုင်အောင် ဖူးတွေ့ရတယ်။ ဂန္ဓကုဋိ အပေါ်မှာ စေတီတည်ထားခြင်းပါ။ ထောင့်လေးထောင့်မှာ ပင်မစေတီတော်ကြီးနဲ့ ပုံစံတူ စေတီလေးဆူကိုလည်း ဖူးတွေ့ရတယ်။
ဒီဗောဓိညောင်ပင်ကတော့ မဟာဗောဓိစေတီတော်ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ တည်ရှိပြီး ပေ ၁၀၀ ကျော်ကျော်မြင့်တဲ့ အရိပ်ကောင်း အပင်တစ်ပင်ပါ။ ဗောဓိပင်ဟာ ဘုရားအလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားနဲ့ အတူ တစ်ချိန်တည်း တစ်ရက်တည်းပေါက်ဖွားခဲ့လို့ (ဖွားဖက်တော်)မှာ ပါဝင်တယ်။ ဒီဗောဓိညောင်အောက်မှာ ဘုရားရှင် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော် ရခဲ့တဲ့နေရာလဲဖြစ်တယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ မှီခို သီတင်းသုံးခဲ့တဲ့ ပရိဘောဂစေတီလဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဒီဗောဓိညောင်ပင်ကို တလေးတစား လာဖူးကြတယ်။ ဗောဓိညောင်အောက်မှာ ဘုရားရှိခိုးစာတွေ ရွတ်ဆို၊ ပရိတ်၊ ပဌာန်းရွတ်၊ မေတ္တာပို့၊ ဘာဝနာပွား ဆုတောင်းနေကြတာ အားလုံးရဲ့ မျက်နှာတွေဟာ ကြည်လင်နေတာတွေ့ရတယ်။ ဗောဓိညောင်ရွက်ကိုလည်း အမြတ်တနိုး ကောက်ယူသွားကြတယ်။
ယခုလက်ရှိဗောဓိပင်ကတော့ ဘုရားရှင်လက်ထက်က အပင် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သီဝနတ်ဘုရားကို ကိုးကွယ်တဲ့ ဘင်္ဂလားပြည် အလည်ပိုင်းကို အုပ်စိုးတဲ့ သာသင်္ကမင်းက ခရစ်နှစ် ၆ ရာစုခန့်က ဗောဓိပင်ကို ခုတ်ဖြတ်တူးဖော်ပစ်ပြီးထောပတ်များလောင်း ထည့်ကာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ Harry Lwin ဤအကြောင်းအရာကို ကြားသိပြီး မဂဓတိုင်းပြည့်ရှင် အကြောင်းကြားတော့ ဘုရင်ပူရာဏမာဗာက ထပ်မံစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။ တဖန် သာသင်္ကမင်း ကထိုဗောဓိပင်ကို ထပ်မံဖျက်ဆီးပြီး ဤနေရာ၌ ဗောဓိပင် မစိုက်ရဟု အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရင် ပူရာဏမာဗာကလည်း ဒုတ်ိယအကြိမ် ထပ်မံစိုက်ပျိုးပါတယ် အံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ထိုဗောဓိပင်ဟာ တစ်ညတည်း ၁၀ ပေခန့်ကြီးမြင့်လာခဲ့ခြင်းပါ။ အဲဒီဗောဓိပင်ကိုလည်း သာသင်္ကမင်းက ၃ ကြိမ်မြောက် အကြွင်းမရ ခုတ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးပြီး ၂၄ ပေခန့်မြင့်တဲ့ ကျောက်လက်ရန်းကြီးကို ကာရန်ထားခဲ့ပါတယ်။ ပူရာဏမာဗာကလည်း နွားနို့ဖြင့် သွန်းလောင်းပြီး တတိယ အကြိမ်မြောက် စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။
( ကျောက်စာဝန် ကာနင်ဂန်ကမူ ထိုကျောက်လက်ရန်းကြီးကို ဗောဓိပင်အား ရန်သူတို့ မဖျက်ဆီးနိုင်ရန် ဘုရင်ပူရာဏမာဗာ ကပဲ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်)
ဒယ်အိုးထဲဆင်းမည့် သာသင်္ကမင်းဟာ ဗောဓိပင်ကို တူးဖော်စဉ်က အမြစ်အဆုံးကို ရှာမတွေနိုင်ခဲ့ ဟုလည်း ဆိုထားပါသေးတယ်။
ခရစ်နှစ် ၁၈၁၁ ခုက ဘူချန်ဟန်မီတန် အမည်ရှိ အင်္ဂလိပ်ပညာရှင် တဦးက ဗုဒ္ဓဂယာကို ရောက်ခဲ့ဘူး ရာ သူက ခက်မ ၅ ဖြာ နှင့် စည်ပင်နေသည့် အမြင့်ပေ ၃၀ ရှိ ဗောဓိပင်ကြီးကို မြင်တွေခဲ့ပြီး အဲဒီ ဗောဓိပင်ရဲ့ သက်တမ်းမှာ နှစ်တရာရှိမည် မထင်ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အေဒီ ၁၈၇၀ မှာ ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် အဲဒီဗောဓိညောင်ကြီး ပြိုလဲသွားပြန်တယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံချုပ်က ဆာအဲလစ်စန္ဒားကနိမ်ကမ်အား တာဝန်ပေးပြီး သူက လဲသွားတဲ့အကိုင်းကို ခုတ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ ပြန်စိုက်ထားခဲ့လို့ ယခုတိုင် ကျန်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ ဒါကတော့ ဗောဓိညောင်ပင်ရဲ့ မှတ်သားစရာ မှတ်တမ်းလေးပါ။ မူလဗောဓိပင် မဟုတ်ပေမယ့် မူလဗောဓိပင်ရဲ့ အဆက်အနွယ်ဖြစ်တယ်လို့ သဘောပေါက်ရပါလိမ့်မယ်။
(၃) သတ္တဌာန = ဘုရားဖြစ်ပြီး တရားနှလုံးသွင်းကာ ဘုရားရှင် နေခဲ့တဲ့ နေရာ ခုနစ်နေရာ
ဒီပလ္လင်တော်ကတော့ ဗောဓိညောင်ပင်နဲ့ မဟာဗောဓိစေတီအကြားမှာ တည်ရှိပြီး ဘုရားရှင် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော် ရခဲ့တဲ့ ထိုင်တော်မူရာ နေရာဖြစ်တယ်။ စကြာဝဠာ ကမ္ဘာမြေကြီး စတင်ပေါ်ထွန်းရာ နေရာလည်းဖြစ်၊ မဟာဗောဓိစေတီတော်ရဲ့ အနောက်၊ ဗောဓိညောင်ပင်ရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ တည်ရှိကာ ယခု ကျောက်ဆစ်လက်ရာ ပလ္လင်တစ်ခု အစားထိုးထားတာ ဖူးတွေ့ရတယ်။ အသောကမင်း လှူဒါန်းထားတဲ့ပလ္လင်လို့ သမိုင်းပညာရှင်တွေ ယူဆထားကြတယ်။ ဘုရားဖြစ်ပြီးတာနဲ့ ဘုရားရှင်ဟာ အဲဒီနေရာမှာ (၇) ရက်ပတ်လုံး ဖလသမာပတ် ဝင်စားပြီး နေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာကို ပလ္လင်္ဂသတ္တာဟ လို့ခေါ်တယ်။ အရင်တုံးကတော့ ခြံမခတ်ထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗေဒင်ဆရာတွေရဲ့ (အောင်မြေ)ဆိုတဲ့ အဟောကြောင့် ဘုရားဖူးလာတဲ့ သူတွေ အလုအယက် ဗောဓိညောင်နားက မြေတွေကို ကုတ်ယူကြတယ်။ ခြစ်ယူကြတယ်။ အလုအယက် ယူကြတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘုရားဖူးက တစ်ယောက်နှစ်ယောက် မဟုတ်ဘူးလေ။ ထောင်သောင်းချီပြီး လာနေကြတာ။ တစ်ယောက်ကို အောင်မြေလောက်စာလုံးလောက် ကောက်ယူမယ် ဆိုရင် ဗောဓိညောင်ပင်ကြီးအနီးမှာ ဘာမြေမှ ကျန်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဗောဓိပင်ကြီးလဲ ပျက်စီးသွားမယ်။ တချို့လဲ ဗောဓိပင်ရဲ့ အခေါက်ကို ခွာယူချင်ကြသေးတယ်။ ကြည်ညိုတာကို အပြစ်မဆိုချင်ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲနဲစီ ခွာယူသွားရင် ဗောဓိပင်ကြီး ပျက်စီးသွားမှာသေခြာတယ်။ ဒါကြောင့် ဗောဓိပင်ကြီး မပျက်စီးအောင် ဘောင်ခတ်ထား လိုက်တော့တယ်။
ဒုတိယနေရာကတော့ ဘုရားဖြစ်ပြီးသော်လည်း တချို့နတ်တွေက ဘုရားမဖြစ်သေးဘူးလို့ ထင်နေကြလို့ နတ်တွေရဲ့ သံသယကို ပယ်ဖျောက်ဖို့ ဘုရားရှင်ဟာ ပလ္လင်ပေါ်ရပ်ကာ ကောင်းကင်ပေါ် ပျံတက်ပြီိး တန်ခိုး ပြာဋိဟာကို ပြတော်မူခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် ဗောဓိပင်ရဲ့ အရှေ့မြောက်ထောင့် (၁၀၄)ပေ အကွာမှာ (၇) ရက်တိုင်တိုင် ရပ်တော်မူပြီး ဗောဓိပင်ကို မမှိတ်မသုန် ကြည့်ရှုနေခဲ့တယ်။ အဲဒီနေရာကို အနိမိသသတ္တာဟ လို့ခေါ်ပြီး ယခု မဟာဗောဓိစေတီတော်ကြီးနဲ့ သဏ္ဍာန်တူတဲ့ အနိမိသစေတီတော် တစ်ဆူ ဖူးတွေ့ရတယ်။
တတိယနေရာကတော့ မဟာဗောဓိစေတီတော်ရဲ့ မြောက်ဘက်မှာ တည်ရှိပြီး ဘုရားရှင်က တန်ခိုးတော်နဲ့ ရတနာစင်္ကြန်ကို ဖန်ဆင်းကာ ခုနစ်ရက်လုံးလုံး စင်္ကြန်လျှောက် တရားနှလုံးသွင်းခဲ့တယ်။ အမှတ်အသားအဖြစ် အောက်မှာ ကျိုးပဲ့နေတဲ့ အင်္ဂတေကြာပန်း (၁၁) ပွင့်ကို တွေ့ရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မဟာဗောဓိစေတီရဲ့ မြောက်ဘက်မှာ အမြင့် (၃) ပေခန့်ရှိ အင်္ဂတေပလ္လင်ရှည်တစ်ခု ပြုလုပ်ထားပြီး အင်္ဂတေကြာပန်းများ တန်းစီ ပြုလုပ်ထားကာ ဘုရားရှင် စင်္ကြန်လျှောက်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကြည်ညိုစွာ မြင်တွေ့ရတယ်။ ဒီနေရာကို ရတနာစင်္ကမ ရတနာစင်္ကြန်လမ်းလို့ ခေါ်တယ်။
ဒီစတုတ္ထနေရာကတော့ မဟာဗောဓိစေတီတော်ကြီးရဲ့ ပေ (၇၀) ဝေးတဲ့ အနောက်မြောက်ထောင့်မှာ တည်ရှိတယ်။ နတ်တွေ ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့ ရတနာစံကျောင်းတော်မှာ ဘုရားရှင်က ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး သီတင်းသုံးခဲ့ကာ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်များကို ဉာဏ်တော်နဲ့ ဝေဖန်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကို သုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက် ဘုရားရှင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောင်ခြည်တော်တွေ ကွန့်မြူးလာတယ်။ အခုတော့ အုဋ္ဌ်ကျောင်းငယ်လေး တစ်ဆောင်တွေ့ရပြီး ထူပါကျောက်နဲ့ ထုဆစ်ထားတဲ့ ခြံခတ်ထားပါတယ်။ ဒီနေရာကို ရတနာဃရသတ္တာဟ = ရတနာစံကျောင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။
(၃း၅) အစပါလ (ခေါ်) ဆိတ်ကြောင်းညောင်ပင်
ပဉ္စမနေရာကတော့ မဟာဓောဓိစေတီတော်ရဲ့ အရှေ့တည့်တည့် ပေ (၇၀) ကွာတဲ့ နေရာမှာ တည်ရှိပြီး ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာ ဆိတ်ကျောင်းသားများ ဆိတ်ကြောင်းတဲ့ နေရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘုရားရှင်နဲ့ မာနတ်မင်းသမီး သုံးပါး တွေ့ဆုံတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့အပြင် ဟုံဟုံကပုဏ္ဏားနဲ့ တွေ့တဲ့နေရာလဲ ဖြစ်တယ်။ အခု အစပါလ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မဟာဗောဓိစေတီတော် လှေခါး အဆင်းလမ်း ခလယ်မှာ ကျောက်တိုင် တစ်တိုင် စိုက်ထူထားတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီနေရာကို အစပါလသတ္တာဟ လို့ခေါ်ပြီး ဘုရားရှင် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး သီတင်းသုံးခဲ့တယ်။
ဒီဆဋ္ဌမနေရာကတော့ မဟာဗောဓိစေတီတော်ရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် ပေ (၁၇၀) အကွာမှာ တည်ရှိပြီး မုဉ္စလိန္ဒာ ရေကန်အနီးမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာ ဘုရားရှင် ခုနစ်ရက် သီတင်းသုံးတဲ့အချိန် မုဉ္စလိန္ဒာ နဂါးမင်းကြီးက ကြည်ညိုလွန်းလို့ နဂါးမင်းဟာ သူ့ကိုယ်ကို ပလ္လင်တော်အဖြစ် အခွေပြုကာ ဘုရားရှင်အား ထိုင်စေခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ ပါးပျဉ်းကြီးနဲ့ ဘုရားရှင်အား မိုးမစိုအောင် မိုးပေးခဲ့တယ်။ ယခု အဲဒီနေရာ ရေကန်ရဲ့ အရှေ့မြောက်ထောင့် အနီးမှာ ကျောက်တိုင်တစ်တိုင် စိုက်ထူထားပြီး မုဉ္စလိန္ဒသတ္တာဟအဖြစ် တွေ့ရတယ်။
မြန်မာပြည်မှ စိုက်ထားသော လင်းလွန်းပင်
သတ္တမနေရာကတော့ မဟာဗောဓိစေတီတော်ရဲ့ တောင်ဘက် ပေ (၇၀) အကွာမှာ တည်ရှိပြီး လင်းလွန်းပင်အောက်မှာ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ဘုရားရှင် သီတင်းသုံးခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန် တဖုဿနဲ့ ဘလ္လိက ရောက်လာပြီး ပျားဆုပ်မုန့်ကို ဘုရားရှင်အား ကပ်လှူခဲ့တယ်။ ဒွေဝါစိက သရဏဂုံကို ခံယူကာ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဆံတော်ကို ပင့်ဆောင်ပြီး ဥက္ကလာပမှာ ရွှေတိဂုံစေတီ တည်ခဲ့တယ်။ (သံဃာတော် မရှိသေးတဲ့အတွက် သရဏဂုံ နှစ်ပါးကိုသာ ခံယူခဲ့တယ်၊ သူတို့နှစ်ယောက်က ပထမဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်၊ ရွှေတိဂုံစေတီတော်လဲ ပထမဦးဆုံး စေတီတော်ဖြစ်တယ်) ဘုရားရှင်လက်ထက်က လင်းလွန်းပင်ကြီးကတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ကမှ မြန်မာပြည်ကနေ လင်းလွန်းပင် တစ်ပင် ပြန်လည် အစားထိုး စိုက်ထားတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကျောက်စေတီတွေ တွေ့ရပြီး ရာဇာရတနသတ္တာဟ လို့ခေါ်တယ်။
မဟာဗောဓိစေတီတော် တည်ရှိရာ ဂယာမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ရမယ့် သာသနာ့ဆိုင်ရာ အထိမ်းအမှတ်များကတော့ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား တောထွက်ကာ အနောမာသောင်ကမ်းအနီး ဆံတော် ပယ်တဲ့နေရာ၊ ၆ နှစ်တိုင်တိုင် ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်တဲ့နေရာ၊ ဥရုဝေလတောင်တန်း၊ သုဇာတာသူဌေးသမီးဃနာနို့ဆွမ်းချက်တဲ့ သေနနိဂုံးရွာ၊ ဘုရားအလောင်းတော် ရွှေခွက်မျှောတဲ့ နေရဉ္စရာမြစ်ကမ်း၊ သောတ္ထိယ မြက်ရှစ်ဆုပ် လှူတဲ့နေရာ တွေဟာ ခရီးသွား ဘုရားဖူးများအတွက် လှည်ပတ်ကြည့်ရှုတဲ့နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာတွေဟာ ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတော့ ဗုဒ္ဓဂယာလို့ မခေါ်ဘူး။ ဝိနယမဟာဝါပါဠိထဲမှာ ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ဘုရားရှင်ဟာ မိဂဒါဝုန်ကို ကြွတဲ့အချိန် မိဂဒါဝုန်နဲ့ မဟာဗောဓိဟာ (၁၈) ယူဇနာ (တစ်ယူဇနာကို ၁၃ မိုင်နီးပါးလို့ တွက်ချက်ကြသလို တချို့လည်း ၈ မိုင်ကျော်လို့ သတ်မှတ်တယ်) ကွာဝေးတယ် လို့ဆိုထားတယ်။ လမ်းခရီးမှာ ဘုရားရှင်နဲ့ ဥပကတို့ ဂယာမှာ တွေ့ဆုံကြတယ်။ အဲဒီအချိန် ဂယာနဲ့ မဟာဗောဓိဟာ သုံးဂါဝုတ်ကွာဝေးတယ် လို့ဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခု ဂယာမြို့က ကျယ်လာ လူဦးရေများလာလို့ ဗုဒ္ဓဂယာနဲ့ ဆက်သွားလို့ မဟာဗောဓိလည်း ဂယာမြို့နယ်ထဲ ပါသွားခြင်းပါ။ ဂယာမြို့လည်း ဘုရားပွင့်ရာ ဒေသကို အမီပြုပြီး ဗုဒ္ဓဂယာ လို့ လူသိများလာခဲ့တယ်။ အင်တာနေရှင်နယ်အခေါ်ကတော့ Budhgaya ဗုဒ်ဂယာ လို့ပဲခေါ်တယ်။
တောင်တန်း သာသနာပြု ဆရာတော် အရှင်သုခမိန္ဒ (စ၀်ဆုခမ်း ခေတ္တ ဗုဒ္ဓဂယာ) ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ
(၁) မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း
(၂) Microsoft Encarta Premiums 2009, Budh Gaya